Izindaba - “Ekukhuphukeni kwamanani” eminyakeni emibili edlule, eziningi ezincane neziphakathi nendawo ……
“Ekukhuphukeni kwamanani” kule minyaka emibili edlule, amabhizinisi amaningi amancane naphakathi nendawo awakwazanga ukumelana nale ngcindezi futhi asuswe kancane kancane yimakethe. Uma kuqhathaniswa nenkinga ebhekene namabhizinisi amancane naphakathi, amabhizinisi amakhulu anemikhiqizo yobuchwepheshe ethe xaxa anethonya elincane uma kuqhathaniswa. Ngakolunye uhlangothi, ngenxa yesidingo esikhulu sezinto zokusetshenziswa ezivela ezinkampanini ezinkulu, izinto zokusetshenziswa zezinkampani ezinkulu ngokuvamile zisebenzisa ikusasa. Izici zokuhweba ngekusasa zivumela izinkampani ezinkulu ukuthi zithenge izimpahla ezizinzile zabaphakeli bezinto eziluhlaza ezinyangeni ezimbalwa ezizayo ngaphambi kokukhuphuka kwentengo, okunciphisa kakhulu umthelela wokukhuphuka kwamanani entengo eluhlaza ezinkampanini. Ngakolunye uhlangothi, izinkampani ezinkulu zithembele kubuchwepheshe obuthuthukisiwe nasekulawuleni ukukhiqizwa okuphezulu emakethe yaphakathi naphezulu. Inani elengeziwe lemikhiqizo liphezulu, futhi ikhono lokumelana nobungozi bokukhuphuka kwamanani ezinto zokusetshenziswa ngokungangabazeki liqinile.
Ngaphezu kwalokho, ngaphansi komthelela wokuncintisana okuphelele kwezimakethe kanye nengcindezi yezemvelo, amandla okubuyela emuva ahlehla kancane kancane, okubuye kukhuthaze ukuthuthuka kwezobuchwepheshe embonini, imboni yezicathulo ibuyele emgqeni ofanele, kanye nesabelo semakethe sezinkampani ezihola phambili embonini kuye kwanda futhi. Ngokuzayo, ngokuthuthuka okuqhubekayo kokukhethekile kwemakethe, ikhwalithi kanye nezinga leketango lezimbadada leJinjiang lizoletha izimo ezinhle, ukukhiqizwa kuzogxila kakhulu, futhi imakethe izozinza kakhudlwana.
Eqinisweni, ngaphezu kwalezi zinhlokodolobha zobuchwepheshe ezimakethe, ezinye izinkampani zobuchwepheshe ezisezingeni eliphakeme sezivele ziphumelele ekukhiqizeni izingubo ezihlakaniphile. Isibonelo, uhlobo lwangaphansi lwezingubo "Jiaoyi" lubumba kabusha ukuthengiswa kwezingubo ngemininingwane emikhulu nokukhiqizwa okuhlakaniphile ukufeza inzuzo ephezulu kanye nenzuzo ephansi. Ukuqoqwa kwempahla kusondele kakhulu ku-zero. I-Xindong Technology yasungulwa ngo-2018. Ubuchwepheshe be-digital-precision 3D digital simulation technology obenziwe ngokubambisana neChina Textile Information Center buvumela izindwangu ukuthi zisizakale ngobuchwepheshe bedijithali, zisiza izinkampani ukuthi zenze ngokushesha ukuboniswa komkhiqizo kanye nokuthengiswa kwangaphambili kwezindleko, nokunciphisa izindwangu u-50% wezindleko zocwaningo nezentuthuko no-70% wezindleko zokumaketha zabakhiqizi nabanikazi bomkhiqizo banciphise umjikelezo wokulethwa ngu
Ukuthunyelwa kwezembatho manje sekuphezulu, ukukhushulwa kokuthengisa + ubusika obubandayo kusiza ukusetshenziswa kwezingubo
Ethonywe yilo bhubhane engxenyeni yokuqala yonyaka, imali engaphezu kuka-80% yemali yezimboni zezingubo iye yehla, okuthinte kakhulu ukuchuma kwemboni. Ngokwemininingwane evela eMnyangweni Wezimboni Nobuchwepheshe Bolwazi, ngo-Agasti, ukuthunyelwa kwezimpahla zokugqoka kukhuphuke ngo-3.23% unyaka nonyaka, okwakungokokuqala ukuthi ukukhula okuhle nyangazonke kuqale kabusha ngemuva kwezinyanga eziyi-7 zokukhula okungekuhle phakathi nonyaka.
NgoSepthemba, imisebenzi kazwelonke yango-2020 "Yenyanga Yokukhuthaza Ukusetshenziswa" ehlelwe nguMnyango Wezohwebo kanye neCentral Radio, iFilm neThelevishini Isiteshi kanye neholide leshumi nambili lomkhosi ophindwe kabili kwaba nomthelela omkhulu embonini yezembatho nezindwangu. Imisebenzi elandelayo yokuphromotha ye- “Double Eleven” ne- “Double 12 w izoqhubeka nokwandisa ukusetshenziswa kwezindwangu nezingubo. Ngaphezu kwalokho, i-China Meteorological Administration yathi ngo-Okthoba 5 ukuthi umcimbi weLa Niña kulindeleke ukuthi wenzeke kulobu busika, obhekisa esimweni samanzi abandayo anamazinga okushisa angalawuleki enkabeni yenkabazwe nasempumalanga yePacific futhi asefinyelele ezingeni elithile umfutho nobude besikhathi. Isimo sezulu esibanda ngokwedlulele kulobu busika sikukhuthaze kakhulu ukusetshenziswa kwezingubo zasebusika.
Isikhathi Iposi: Aug-25-2020
Ibhodi le-Insole No-Eva, Needle Punch Indwangu Nonwoven, Iphepha le-Insole Board Elino-Eva, Indwangu Engavumelani No-Eva, Indwangu Nonwoven Laminated Nge Eva Foam, Ishidi le-Shoe Insole Material,